मेरो कार्यकालमा सघको भवन निर्माण गर्ने छु |
मेरो कार्यकालमा सघको भवन निर्माण गर्ने छु
माघ,२२,बनेपा,राजेशराज महत जिल्लाको शैक्षिक क्षेत्रमा एक परिचत नाम हो । पनौती १० काभ्रे स्थायी बासिन्दा महत अध्यापन सँगै शिक्षण पेसा संलग्नहरुको पेसागत हकहितका लागि पनि सक्रिय हुनुहुन्छ । उहाँले २५ वर्ष लामो शिक्षण अनुभव बटुली सक्नुभएको छ । विद्यार्थी जीवनबाट नै राजनीतिमा सक्रिय भई शिक्षण पेसामा प्रवेश सँगै २०५० सालबाट नेपाल शिक्षक संघको विशिष्ट सदस्यता ग्रहण गरेका उनी नगर क्षेत्र सँगै सातौं अधिवेशनबाट जिल्ला उपाध्यक्षको पद सम्हाल्नु भयो ।
माघ २६ र २७ गते हुन लागेको शिक्षक संघको आठौं अधिवेशनका लागि उनले जिल्ला अध्यक्षको पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन् । पेसागत संस्थाको आवश्यकता र भूमिका, उम्मेदवारीका्े औचित्य र वर्तमान शैक्षिक रणनीति र भावि योजनाका विषयमा उहाँसँग काभ्रे सन्देश साप्ताहिकले गरेको कुराकानीको अंश ः
– किन रोज्नुभयो शिक्षक संघलाई ?
संघको इतिहास लामो छ । शिक्षकको पेसागत सुरक्षामा यो संस्था अग्रस्थानमा छ । प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई अवलम्वन गरेको र शिक्षकहरुको पेसागत हक हितमा लागि पर्ने भएकोले संघ नै मेरो रोजाइमा प¥यो ।
– शिक्षकहरुको छाता संगठनको रुपमा शिक्षक महासंघको गठन पछि विस्तारको प्रकृया अघि बढिरहेको छ त्यसले मात्र शिक्षकहरुको
पेसागत हकहितको संरक्षण गर्न नसक्ने हो ?
शिक्षक महासंघ पनि नेपाल शिक्षक संघ कै पहलमा भएको हो, शिक्षक महासंघ बन्नको लागि आधारभुत संस्था आवश्यक हुन्छ त्यसैले महासंघ हुनको लागि पनि अरु पेसागत संघ संगठनहरु आवश्यक पर्दछ । तसर्थ महासंघ सगै संघ संगठन पनि रहन्छन्
– शिक्षक संघ संगठनले समग्र शिक्षण पेसा, शिक्षकहरुको समस्यामा खासै आवज उठाउन सकेन भनिन्छ नी ?
अहिले जति पनि पेसागत उपलव्धि भएका छन् ती सबै पेसागत संस्था मार्फत नै सम्भव भएको हो यद्दपी अझ सबै कुराहरु पूरा भएका छैनन् । हामी निरन्तर प्रयासरत छौ । धेरै विषय प्रक्रियामा नै छन् । अझ शसक्त आन्दोलनको आवश्यकता रहेको छ ।
– सधै व्यक्ति प्रति लक्षित भएर मात्र कार्य गर्यो, पेसामा कसरी प्रवेस गराउने, कसरी पाएक हेर्ने भन्नेमा मात्र सिमित रह्यो भन्ने आरोप छ ।
यो संघ प्रतिकोल कपोलकल्पित कुरा हो जस्तो लाग्छ त्यो, हाम्रो प्रयास शिक्षण पेसालाई अझ बढी मर्यादित बनाउन तिर परिलक्षित छ । हामी सधै समग्र शिक्षक तथा शिक्षण पेसाको पक्षमा छौ ।
– जिल्लाका शैक्षिक मुद्धाहरुमा संघको भूमिका साच्चिकै कमजोर भएको हो ?
जिल्लामा शैक्षिक भौतिक लगायत मुद्दामा शिक्षक संघको भुमिका शसक्त रहेको छ र रहने छ किनकी नेपाल शिक्षक संघ काभ्रेको नेतृत्व अरु भन्दा जुझारु हुनुको साथसाथै परिपक्व छ । आम प्रजातन्त्रवादी शिक्षकहरुको साथ सहयोग र समर्थन प्राप्त भएकोले दुई हजारको हाराहारीमा शिक्षकहरु यसमा आवद्ध रहेका छन् । जबकी काभ्रेमा जम्मा ३ हजार १ सय मात्र शिक्षक छन् ।
– आगामी कार्यकालका लागि अध्यक्ष पदको दावी गर्नु भएछ यो किन ?
हाम्रा अग्रजहरुले संघलाई यहाँसम्म ल्याए । शिक्षक संघ सधै आम शिक्षकहरुको पेसागत हकहितलाई सुनिश्चित गर्दै अघि बढिरहयो । यसलाई अझै अव्वल सावित गर्नु बर्तमान आवश्यकता हो यसका लागि मेरो उम्मेदवारी अध्यक्ष पदको लागि रहने छ ।
– यस अघि पनि संघको जिल्ला उपाध्यक्ष पद सम्हाल्नु भयो यस अवधिमा के गर्नुभयो ?
संस्थामा व्यक्तिको भूमिका गौण हुन्छ, सबै मिलेर गरेको प्रयास नै सार्थक रहन्छ । तै पनि शिक्षकहरुको मर्यादा कायम गर्न, पेसागत दक्षता अभिवृद्धि गर्न, संघ कै आन्तरिक अवस्था, सांगठनिक अवस्था सुदृढीकरण, परीक्षाको पुनः संचालन, तात्कालीन अवस्थामा शिक्षक युनियन र हाल शिक्षक महासंघ गठन, शिक्षक संघको स्थानीय तहको विवादरहित तरिकाले गठन आदिमा मेरो भूमिका रहेको थियो ।
– नेतृत्व पाउनेमा ढुक्क हुनुहुन्छ ?
समग्र शिक्षकको पक्षमा म छु । साथीहरुकै आग्रह र अनुरोधमा मैले उम्मेदवारको घोषणा गरेको हुँ । म धेरै आशावादी छु ।
– जिल्लामा संघमा आवद्ध शिक्षकको संख्या बढि छ भनिन्छ ? ती सबै शिक्षक बिच कुन रुपमा परिचित हुनुहुन्छ ?
हो शिक्षक संघ सदस्य संख्याको हिसावले अरु भन्दा बढी र गुणात्मकताको हिसावले अव्वल छ, सबै शिक्षक साथीहरुको निरन्तर माया गर्नु भएको छ । सुख दुःखमा सधै नजिक छु ।
– संघ भित्र त धेरै पहिले देखि नै गुटको समस्या छ भनिन्छ , यसको अन्त्यका लागि कुनै प्रयास भएको छ ?
शिक्षक संघमा बाहिर बजारमा प्रचार गरिए जस्तो गुट उपगुटको समस्या अहिले छैन, सबै मित्रहरुमा समन्यायिक ढंगले सम्बन्ध अगाडी बढेका छन् , जस्ता सुकै पेसागत र सांगठनिक समस्याहरु समाधान गर्न हामी एकजुट छौं, त्यसको लागि नेतृत्व सधैव चनाखो रहेको छ । हामी सबै एकै छौ ।
– अधिवेशनका समयमा शिक्षकहरुको पदका लागि हानथाप भए पनि कार्यकालमा भने सक्रिय भूमिका खेल्न नसकेको आरोप लग्ने गरेको छ ।
यो भनाइ वस्तुपरक छैन यथार्थ रुपमा भन्ने हो भने हालको जिल्ला कार्यसमितिका पदाधिकारी एवं सदस्यहरुले आ आफ्नो जिम्मेवारी सफलताकासाथ निर्वाह गर्नु भएको छ । त्यसका प्रति तपाईकै पत्रिका मार्फत धन्यवाद पनि दिन चाहान्छु ।
– जिल्लाका शिक्षण संस्थाहरुमा कस्ता समस्या देख्नुभएको छ ?
काभ्रे जिल्ला भिन्न भिन्न भूगोल मिलेर बनेको छ । भूगोलकै कारण पनि शैक्षिक संस्थाहरुले विभिन्न समस्या भोग्नु परेको छ । शिक्षकका आधारभूत हकहितका समस्या, विद्यालयहरुमा दरबन्दीका समस्या, भौतिक समस्या जस्ता अनेकन विषय रहेका छन् । यस विषयमा हाम्रो संघ परिचित छ । र त्यस प्रकारका समस्या समाधानमा निरन्तर प्रयासरत छ ।
– तपाईले नेतृत्व पाएको खण्डमा नयाँ काम के गर्नुहुन्छ ?
शिक्षक संघको आफ्नै भवन निर्माण, परीक्षालाई अझ व्यवस्थित र मर्यादित बनाइ अरु थुप्रै विद्यालयमा विस्तार गर्नेछु । वर्तमान संघीय संरचनाले ल्याएको अन्योललाई अन्त्य गरी शिक्षकहरुलाई अपहेलित गर्ने प्रयासको अन्त्य, पेसागत दक्षता अभिवृद्धि, तहगत बढुवा, अस्थायी, राहत, वालविकासका शिक्षकहरुको समस्या समाधानमा पहल, कार्यसम्पादन मूल्याकंनलाई वस्तुपरक बनाउने, नेपाल शिक्षक संघ काभ्रे चिनाउने चिनारी वा संकेतको व्यवस्था, काभ्रेको शिक्षक महासंघ नेपाल शिक्षक संघको नेतृत्वमा बनाउने कार्य गर्नेछु ।
– राज्यले कर्मचारी नै भए पनि शिक्षक र अन्यलाई फरक दृष्टिकोणले हेर्छ भन्ने आरोप छ यो सत्य हो ?
राज्यले शिक्षकलाई राष्ट्र सेवकको रुपमा कहिले हेरेको छैन् । विभेदपुर्ण व्यवहार छ, त्यसैले पनि आज आम शिक्षकहरुको मनोवल उचों हुन सकिरहेको छैन । विभेदकारी नीतिका कारण पनि शिक्षकहरु मर्कामा परेका छन् र सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा सुदृढीकरण हुन सकिरहेको छैन, शिक्षकका पेसागत समस्याहरु लगायत वृत्ती विकासमा सरकार उदासीन रहेको छ भने शिक्षामा गरिएको राष्ट्रिय लगानी पनि ज्यादै न्यून रहेको छ । राष्ट्रिय वजेटको कम्तिमा पनि १७% लगानी हुनु पर्नेमा त्यसो हुन सकिरेहको छैन ।
– संघियता कार्यान्वयन पछि स्थानीय तहलाई शिक्षा सम्बन्धी प्रशस्त अधिकार प्रदान गरिएको छ । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
अहिलेको संविधानमा स्थानीय तहलाई माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा सम्बन्धी अधिकार रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसैको आधारमा स्थानीय सरकारहरु शिक्षा सम्बन्धी अन्य पक्षहरु भन्दा पनि शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा र अवकासमा उद्दत रहेको देखिन्छ जुन नाजायज छ । यसले शिक्षकको मनोवललाई गिराउँछ त्यसैले स्थानीय सरकारहरुलाई व्यवस्थापकीय अधिकार मात्र दिएर नियुक्ति सरुवा बढुवा जस्ता अधिकार जिल्ला समन्वय, प्रदेश र संघीय सरकारको अधिनमा राखिनु पर्दछ अब बन्ने सघंीय कानुन, प्रादेशिक कानुन, शिक्षा नियमावलीमा त्यो कुरा उल्लेख हुनु जरुरी छ । यसका लागि शिक्षक संघ सदैव चनाखो रहेको छ ।
– अब शिक्षक पेसा सुरक्षित, आकर्षणयुक्त बन्ला कि झनै समस्या ग्रस्त ?
२१ औं शताव्दीमा प्रतिश्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन तर्फ सरकारहरु लागिपर्नु पर्नेछ , त्यसका लागि शिक्षकहरुको वृत्ति विकास अपरिहार्य छ, शैक्षिक लगानी वृद्धि, शिक्षामा अपनत्वको भावनाको विकास, द्वैत शिक्षा नीतिको अन्त्य शिक्षकको नियुक्ती, सरुवा, बढुवामा वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन सक्दा मात्र शिक्षक पेसा सुरक्षित र आकर्षणयुक्त बन्न सक्दछ ।
– अन्त्यमा के भन्न चाहानुहुन्छ ?
काभ्रेली शिक्षकहरुको तमाम समस्या समाधानार्थ एक पटक शिक्षक संघ काभ्रेको नेतृत्व प्रदान गर्ने अवसर प्रदान गर्न सम्पूर्ण शिक्षक संघ सम्बद्ध मित्रहरुमा अपील गर्र्दै तपाईं लगायत काभ्रे सन्देश साप्ताहिक टिमलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहान्छु ।
-सन्देश साप्ताहिक बाट